Home News Madaxweynaha Jabuuti iyo R/wasaaraha Itoobiya kulankii ay yeesheen maxaa kasoo baxay!!
Madaxweynaha Jabuuti iyo R/wasaaraha Itoobiya kulankii ay yeesheen maxaa kasoo baxay!!
Dowladda Jabuuti ayaa Ra’iisal wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ku ammaantay isbedelada la taaban karo ee uu ku soo dabaalay gudaha Itoobiya iyo guud ahaan gobolka iyo isdhex-galka Geeska Afrika.
Ra’iisal wasaare Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo maanta shir labo geesood ah ku yeeshay magaalada Adis-ababa ayaa ka wada hadlay arrimo badan oo ku saabsan dalalka Ethiopia iyo Jabuuti iyo waliba mida gobolka.
Ka dib shirka labada hoggaamiye,Wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia Workneh Gebeyehu ayaa u sheegay wariyeyaasha in Ra’iisal wasaaraha Itoobiya iyo madaxweynaha Jabuuti ay ka wada hadleen siyaabaha lagu xoojin karo xiriirka labada dal iyo isdhexgalka gobolka.
Previous articleIdaacad ku hadasha afka kooxda Al-shabaab oo duqeeyn lagu burburiyay
Next articleSoomaaliya oo ku socoto wado aay adkaan doonto in dib looga laabto
Madaxweynaha Dalka Kenya Oo Ka Dhawaajiyay In Ciidamada Kenya Aysan Kasoo...